Magangelyo iyo Socdaal - Gurmadka Coronavirus
Faafida cudurka cusub ee Coronavirus (COVID-19) waxa la xakameeyay in la dalbado qaxootinimo ama la cusbooneysiiyo sijoornooyinka dhacsan, si aad u ogaato waxa is badalo kala soco wax walba oo cusub halkaan.
KORDHINTA WAQTIGA DHICITAANKA SHARCIYADA ILAA IYO 31KA DISHEEMBAR 2020
Dhamaan sharciyada eey bixiyeen xafiisyada dowladeed ee wadankan Talyaniga ee dhacayay lagaso bilaabo 18ki maarso 2020 waxa loo kordhiyay waqtigi eey dhacayeen kasoo laga dhigay ilaa 31ka Disheembar 2020. dhicitaanka waxa ku aaleyso sharciga korkiisa kii hore lakin caadiyan waxa uu dhacaya waqtiga an kor ku xusnay.
Warbixin xalada deg dega ah ee COVID-19 iyo qababka loo dalban karo qaxootinimada calamig ah.
Arinka Cudurka COVID-19 wa mid garay Italiya iyo dunida inteda badan
Si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada wa muhiim in qof wlba uusan ka bixin mesha uuku noolyahay, sabab ka baxsan caafimaad, shaqo iyo baahi muhiim ah.
wixi intaas dheer waxa la kulmeysa ganaax adag.
Si loo xakameyo in uu faafo cudurka waxa la amray shuruudo badan tasoo qasabtay in la xiro goobihi intefiyuuga lagu qaadi lahaa.
1. Ma waxaad dalban rabta qaxootinimo?
Dhamaan xafiisyada wey xiran yihiin , hadiise aad deg deg u tahay tag Kastuurada kugu dhaw wey ku diiwan galineysa lakin arinkaga horay lagama furaayo waxadna sugi donta inta lagaso waco.
2. Ma sugeysay in lagasoo waco komishanka, mise laheed balan waqtigan uu xiranyahay?
Si loo xamakeeyo fidida cudurka, Dhamaan waxa xiran xafiisyadi komishanka, marka eey arinkaan dhamaato waxa kulasoo xiriiri doono komishanka sidi eey marki horeba balanka kuguso direen.
Ogsoonow komishanka waxa uu kalasoo xiriiri doonaa adreski ugu danbeyay ee aad dhiibtay, xasuusnow hadii aadan ku jirin xero qaxooti wa inaad ku qorta magacada albabka guriga aad degantahay.
3. Ma sugeysay jawaabta interfiyuugi aad martay?
Waxaad heli doonta sida ugu dhaqsaha badan markey macquul noqoto jawabtada.
Hadii dhawan eey kuso gaartay jawabta oo aadan weli tagin kastuurada sug inta xalada deg dega ah laga baxayo.
Hadii adan ku qanacsaneen jawaabta lagu siiyay oo aad rabtid in aad ka dacwootid ogsoonow waxaad heysata waqti dheraad ah oo aad kaga dacwoon karo, marka hore lasii xiriir email ahan ama telefoon looyarkaga kadibna marku arinkan dhamado dacwadada gudbiso.
4. Ma waxaad rabta war bixin dherad ah mise inaad dokumentiyaal gaarsiiso Maxkamada?
Dhaman waxa xiran xafiisyada, welise waxaad kusoo hagaajin kartaa ciwanada hoos ku xusan. , midkii kuu sahlan.
Saxnimada ogolaanshaha deganaanshaha
20-Mar-2020 14 May 2020
Ayada oo la tix raacayo sharciga”Daawe Talyaniga” waxa lagula socodsinaya in dhaman Sijoornooyinka eey cusbooneysiisan yihiin ilaa 31ka Agoosto 2020. 31ka Agoosto 2020..
Kordhinta waraaqaha aqoonsiga
20-Mar-2020 17 August 2020
Dhamaan sharciyada ey aqoonsantahay dowlada talyaniga oo waqtigi gooda dhicitaanka la gaaray ama dhici rabo waxa loo kordhiyay waqtiga laga bilaabo 18ka bisha 3aad ilaa 31dabisha 8aad 2020, taariqda waxa kusii qornaanayo midi hore laakiin sharciyan waa laguu kordhiyay. Sida ku xusan qodobka (Art. 104 Dl Cura Italia)
SHARCIYADA WAA KUWEE?
Waxaa hoos imaado dhamaan sharciyada hoos ku xusan, Kaarka dagananshaha, kan la siiyo dadka waa weyn ee da’adooda eey dhaaftay cimrigi shaqada, kan cadeenaayo shaqalaha dowlada, Kaarka askarta iwm , waa qasab in uu yahay kar laga sharciyeeyay xafiis dowladeed lehna sawir cadenayo qofka aad tahay.
Xarunta Socdaalka ee Booliska Socdaalka - Oggolaanshaha deganaanshaha, xarunta booliiska ayaa looga yeeray
16-Mar-2020 11 April 2020
OGEYSIIS - MADAXWEYNAHA Degenaanshaha, U dir DUGSIYADA QUESTURA
Raacitaanka Sharciga Sharciga. N. 9 ka 2 Maarso, wicitaanada xarunta booliska, ee la helo waqtiga gudbinta dalabyada dukumiintiyada daganaanshaha, dib ayaa loo dhigi karaa taariikh kastoo taariikhi ah waxaa lagaraaci doonaa sms. Kahor intaanan aadin saldhigga booliiska, waxaan kugula talineynaa wadatashiga '' Portal Portal '- https://www.portaleimmigrazione.it/adoo ku xaqiijinaya magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah ee Xafiiska Boosta Sportello Amico si uu u soo bandhigo codsiga, si loo hubiyo taariikhda kulanka.
INFO Dhammaan Xafiisyada Socdaalka ee xarunta booliiska ee cusboonaysiinta iyo bixinta ogolaanshaha deganaanshaha si ku meel gaar ah ayey dadweynaha ugu xiran yihiin.
Kaliya xisaabiyeyaasha soo gudbinta dalabka magangalyada caalamiga ah (codsiga magangalyada) ayaa furan.
Xigasho: Wasaaradda Arimaha Gudaha
31 March 2020 8 April 2020